You are at:Home»Life Style»Category: "Relationship"
မမတွေအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးကိုကိုတွေကို “ အိပ်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လား ။ ဒီနေ့ညစာ ဘာနဲ့စားမလဲ။ ဒီနေ့မျက်နှာလဲ မကောင်းပါလား။ ဒီနေ့ ဘာသတင်းထူးလဲ ” ဆိုတဲ့ သာမန်မေးခွန်းလေးတွေကိုတော့ နေတိုင်းမေးမိမှာပါ။…
ကိုယ့် Crush မှာရည်းစားရှိနေပီဆို ဘာလုပ်မလဲ?
( ၁ ) ဆက်ချစ်မလား ? အချစ်ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ကူးခတ်ဖို့ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယ တို့ပေါင်းစပ် အားထုတ်မှုရှိမှ ကမ်းတစ်ဖက်ကို ရောက်နိုင်မယ်။…
အကင်စားမယ်၊ ကော့တေး စပ်ပြီး ဖျော်သောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် ကော့တေး ဖျော်စပ်နည်း တင်ပေးမယ်ဗျာ။ သစ်သီးစုံကော့တေး ဖျော်စပ်ဖို့ဆို နာနတ်သီး၊ ဖရဲသီး၊ စပျစ်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီး နဲ့…
အသည်းကွဲတယ်ဆိုတာ တုန်လှုပ်ဖို့ကောင်းပြီး ခံစားရခက်တဲ့ ဝေဒနာတစ်ခုပါ။ အသည်းကွဲပြီဆိုရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်တာတွေ၊ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးတာတွေ၊ ထိခိုက်နာကျင်တဲ့ စကားလုံးတွေစတဲ့ ရလာဒ်တွေ အများကြီးပါပဲ။ ပိုပြီး သိထားသင့်တာက အသည်းကွဲရင်…